Lalao Smarty miboiboika Xmas Edition aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Smarty miboiboika Xmas Edition an-tserasera
Lalao Online Bubble lalao Funny Games Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Puzzle lalao Puzzle Vakana 3 misesy On care Efijery kasihina Html5 Android
Fa rehetra mpankafy ny piozila tiantsika mba hampidirana vaovao Smarty lalao miboiboika X-Mas Edition. Ny mpanoratra no niezaka ny manambatra ny zava-bita rehetra izay sokajy ny lalao. Ny lalao ny tetika dia tena tsotra, nefa mbola tena mahavariana. Noho izany, isika dia milalao saha tamin'ny miorina eo amboniny dia mifangaro miloko baolina, ary napetraka napetrapetraka. Baolina dia hiseho ambany iray. Ny tanjona hitifitra azy ireo mba hanorina ny andianà zavatra hafa sekely telo, fara fahakeliny. Dia vaky ka hanjavona avy amin'ny varavarana lamba, dia homenay isa ho azy. Tahaka ny fantatrareo ihany ny asa sy hanadio amin'ny solaitrabe, na mba toy ny maro hevitra. Tsarovy koa fa rehefa avy ny fotoana iray, dia ny tampony fotoana entana vaovao farany. Ary ho miverimberina tsindraindray mba mila manana fotoana hanaovana ny zava-drehetra. Raha ny laharana ambany mikasika ny tany dia ho very. Game Smarty miboiboika X-Mas Edition manana sary tsara sy ny mozika izay mahatonga mahaliana rivo-piainana izay mety hahaliana ny mpilalao rehetra izay tia piozila ity karazana. Haingana hanokatra Smarty miboiboika X-Mas Edition eo amin'ny toerana sy ny mitsoraka ao amin'ny tontolon'ny Puzzles mahavariana. Ankafizo ny lalao.